Asa 14 - Ny Baiboly
Asa toko 14
Paoly sy Barnabe tao Ikonioma sy Listra - Ny nitoriany tamin'ny tanàna maro, sy niverenany tany Antiokia.
1Nony tany Ikonioma izy roa lahy, dia niara-niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jody ka nitory teny, ary betsaka no nino, na Jody na jentily. 2Ny Jody izay tsy nino anefa, dia nitarika sy nanome fo ny jentily hanohitra ny rahalahy. 3Fa na izany aza, dia nitoetra ela tao ihany izy roa lahy, ka nitory tamin-kasahiana noho ny fitokiany ny Tompo, izay nanamarina ny tenin'ny fahasoavany tamin'ny nampanaovana azy ireo famantarana sy fahagagana. 4Dia nisara-tsaina ny olona rehetra tao an-tanàna, ny sasany nomba ny Jody, ny sasany nomba ny Apostoly. 5Efa nivonon-kanala baràka sy hitora-bato ny Apostoly ny jentily sy ny Jody mbamin'ny lehibeny; 6saingy reny izany, ka lasa nankany Listra sy Derbe, tanàna any Likaonia, ary tamin'ny tany rehetra manodidina izy ireo, dia nitory ny Evanjely tany.
7Tany Listra, nisy lehilahy anankiray nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny ka tsy mbola namindra, fa nipetraka hatrany hatrany. 8Nihaino an'i Paoly nitory teny izy io, ary nibanjina azy Paoly, ka nahita fa nino izy fa ho sitrana, 9dia hoy izy tamin'ny feo mahery: Mitsangàna, ka mijoroa amin'ny tongotrao. Dia niantsambotra ralehilahy, ka namindra. 10Nony hitan'ny vahoaka ny nataon'i Paoly, dia niantso mafy tamin'ny fitenin'i Likaonia izy nanao hoe: Andriamanitra maka endrik'olona no nidina nankaty amintsika. 11Dia Barnabe moa nantsoiny hoe Jopitera, ary Paoly kosa Merkory, satria izy no mpandaha-teny. 12Mihoatra noho izany, ny mpisoron'i Jopitera takaikin'ny tanàna mbamin'ny vahoaka aza, dia efa nitondra ombalahy sy fehiloha teo am-bavahady mihitsy, ka nikasa hanao sorona. 13Fa nony nandre izany ny Apostoly Barnabe sy Paoly, dia nandriatra ny akanjony, ka nandroso teo afovoan'ny vahoaka niantso mafy hoe: 14Nahoana, ry olona, no dia manao izany hianareo? Izahay dia olombelona toa anareo ihany, ka ny mitory aminareo no anay, mba hialanareo amin'izao zava-poana izao, sy hanatonanareo an'Andriamanitra velona, izay nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina mbamin'ny zavatra rehetra ao amin'ireo. 15Namela ny firenena rehetra teo aloha handeha amin'ny làlana tiany izy; 16kanefa tsy nitsahatra ny nanisy vavolombelona hanambara ny tenany mandrakariva tamin'ny soa nataony, dia ny mandatsaka ny ranonorana avy any an-danitra, ny mahavokatra ny tany amin'ny fotoana ka mahavoky hanina antsika, sy mahafeno hafaliana ny fontsika. 17Fa na dia izany aza no tenin'izy roa lahy, dia saiky tsy nahasakana ny vahoaka tsy hanao sorona taminy izy.
18Tamin'izay dia nisy Jody tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma, nanome fo ny vahoaka, ka nitora-bato an'i Paoly izy ireo, sy nitarika azy ho any ivelan'ny tanàna, satria nataony ho efa maty izy. 19Kanjo nony tonga nanodidina azy ny mpianatra, dia nitsangana izy, ka niditra tao an-tanàna. Ny ampitso ihany dia lasa nankany Derbe izy sy Barnabe.
20Ary rahefa nitory ny Evanjely tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro, dia niverina tany Listra sy Ikonioma ary Antiokia, 21nankahery fo ny mpianatra, sy namporisika azy haharitra amin'ny finoana, ary nilaza fa amim-piaretana fahoriana betsaka no tsy maintsy hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 22Isan'Eglizy nalehany, nony efa nivavaka sy nifady hanina izy ireo dia nanendry Pretra, sy nanankina azy tamin'ny Tompo izay efa ninoany. 23Dia namaky an'i Pisidia izy ireo, ka tonga tany Panfilia. 24Ary rahefa nitory ny tenin'ny Tompo tany Perjy izy, dia nidina nankany Atalia. 25Avy ao izy, dia niondrana an-tsambo hankany Antiokia, fa teo no nanolorana azy hoentin'ny fahasoavan'Andriamanitra hanao ny asa izay vitany. 26Vao tonga tao izy, dia namory ny fiangonana, ka nitantara ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminy, sy ny namohany ny varavaran'ny finoana ho an'ny jentily. 27Ary elaela ihany no niarahany nitoetra tamin'ny mpianatra tao Antiokia. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0082 seconds